China Carbide Rotary Burr SF Shape -Tree Shape with Radius End ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |ဆင်ဟွာ
Carbide rotary burr SF ပုံသဏ္ဍာန်ကို carbide rotary burr လို့လည်းခေါ်ပြီး အချင်းဝက်အဆုံးနဲ့ သစ်ပင်ပုံသဏ္ဍာန်၊
အရွယ်အစား SF1225 / SF-5 Carbide Rotary Burr သည် သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ရေပန်းအစားဆုံး အရွယ်အစားဖြစ်သည်။
1. ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များ (မက်ထရစ်သို့မဟုတ်လက်မအရွယ်အစား) အရထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
2. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားရှိစံအရွယ်အစားများ , အခြားလိုအပ်ချက်များရှိလျှင်, ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
3. အဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုဘဲ ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်များစွာ၊ အဆုံးဖြတ်ထားသော ဆလင်ဒါပုံ၊ သစ်ပင်အချင်းဝက် မီးတောက်အဆုံးနှင့် မတူညီသောဒီဂရီ၊
4. သင့်ပုံများအတိုင်း သင့်နမူနာများကို ကော်ပီကူးပါ သို့မဟုတ် ကာဗိုက် burr ကိုထုတ်လုပ်ပါ။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်၊ လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
အချင်းဝက် အမျိုးအစား F ပါသော သစ်ပင်ပုံစံ F0313X03-25313338 X
ယခင်- ကာဗိုက် Rotary Burr SE Shape -Oval Shape
နောက်တစ်ခု: Carbide Rotary Burr SG Shape -Tree Shape with Pointed End